Accueil > Gazetin'ny nosy > Fier Mada 2018: Hifototra amin’ny asa fampivelarana ny tanora
Hotontosaina ny voalohany ka hatramin’ny faha-5 aogositra ho avy izao etsy amin’ny Kianjan’i Makis etsy Andohatapenaka ny andiany faha-20 Amin’ilay Tsenabe Iraisampirenena ho amin’ny toekarena eny Ambanivohitra na ny “Fier Mada” (Foire Internationale de l’Economie Rurale). Omaly no nampahafantaran-dRamanantsoa Jacques, tomppon’andraikitra voalohany an’ity hetsika ara-toekarena fanao isan-taona ity tetsy Andohatapenaka teo anoloan’ny mpanao gazety izany.
Tamin’ny fanampim-panazavana nentiny no nanipihany fa “raha 350 ny mpandray anjara tamin’ny Fier Mada andiany faha-19 tamin’ny taon-dasa dia ho tafakatra 400 izany amin’ity ary ny mpitsidika dia tombanana hahatratra 60.000 raha toa ka 40.000 no nisy tamin’ny taon-dasa.
Hetsika ara-toekarena tena nitondra fampivoarana ho an’ny tantsaha Malagasy izy ity, hoy hatrany Ingahy Ramanantsoa Jacques, satria maro tamin’ireo tantsaha Malagasy izay nandray anjara tamin’ny Fier Mada hatramin’izay no niova tanteraka ny tontolom-pihariany ; ka lasa nivelatra tsy hita avanavana.
Ny loha-hevitra hifotoran’ny hetsika moa amin’ity taona ity dia ny hoe “Asa mampivelatra ny tanora: tan-tsoroka eny ifotony sy mifanaraka amin’ny tontolo iainana isam-paritra ho an’ny kaoperativa”.
Goavana dia goavana izany satria ny ho avin’ny tanora sy ny ho fivelaran’ny fiainan’izy ireny no niantefan’ny fisainan’ny mpikarakara, ary izany dia hiainga eny anivon’ny seha-piaraha-monina amam-pihariana andavanandro eny an-tsaha, ary mijery akaiky ny tontolo iainana isam-paritra, nefa koa dia mampivoitra ny fahaiza-manao mahamalagasy amin’ny valin-tanana na ny “kaoperativa”. Izany hoe ny farimbon’asa.
Samy nahita tombontsoa sy fivoarana avokoa ireo rehetra efa nandray anjara tamin’ny Fier Mada hatrizay, hoy ny mpikarakara satria ity hetsika ity dia tsy tsenabe toy ny mahazatra hatrizay fotsiny fa teo dia teo ny sehatra natokana hifandraisan’ny tantsaha sy ny mpandray vokatra mbamin’ny mpanodina vokatra na mpivarotra vokatra, ny mpampiasa vola isantsokajiny, ny tantsaha samy tantsaha te hifanakalo traikefa, sy ny hafa.
Ireo sehatra mpiantoka asa tolotra na “service” ho fanoitran’ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra koa dia tsy ho tratra aoriana amin’ny raharaha toa izao satria raha vao fihariana no fototry ny resaka dia ny asa famokarana no mby an-tsaina voalohany, ka ny asa famokarana eny an-tsaha no hany azo antoka hatrany ho loharanon’izany.
Ny amin’ity indray mitoraka, Fier Mada andiany faha-20 ity aza, hoy Ingahy Ramanantsoa Jacques, dia hiangaviana ny mpitondra fanjakana Malagasy mihitsy mba hanentana ny mpanjifa any amin’ireo nosy manodidina an’i Madagasikara sy firenena hafa aty amin’ny faritry ny ranomasimbe Indiana mba ho avy eto fa tsy hianona fotsiny amin’ireo mpandraharaha ara-toekarena mpivarotra avy any, ohatra, na ny mpanera, fa mba mahita maso ny tena vokatra eto ifotony ny mpanjifa avy amin’ireo nosy aty amin’ny Ranomasimbe Indiana. Sady mizaha tany no mitady izay mahasoa amin’ny vokatry ny tantsaha Malagasy.